I-Monasticism - Ukuphila Ngaphandle Kwehlabathi Ukugxila KuThixo
I-Monasticism yinkqubo yonqulo yokuhlala ngaphandle kwehlabathi, ngokuqhelekileyo ibe yindawo yoluntu efana nabantu, ukuphepha isono nokukhula ngakumbi kuThixo.
Eli gama livela kwigama lesiGrike elithi monachos , elithetha umntu odwa. Iimonki zineentlobo ezimbini: i-eremitical, okanye iinombolo ezizimeleyo; kunye ne-cenobitic, abo bahlala kwintsapho okanye ilungiselelo loluntu.
I-monasticism yamaKristu yaqala kwiYiputa naseNyakatho Afrika malunga ne-270 AD, kunye nootata beentlango , abazithengelayo entlango baze banike ukutya kunye namanzi ukuphepha isilingo .
Enye yezilwanyana zokuqala ezirekhodiweyo zodwa zazinguAbba Antony (251-356), oye wabuya waya kwinqanaba elikhuseleyo lokuthandaza nokucamngca. UAbba Pacomias (292-346) waseYiputa uthathwa njengomsekeli wee-cenobitic okanye ii-monasteries zasekuhlaleni.
Kwimimandla yasekuqaleni yama-monastic, umonki ngamnye wathandaza, wazila ukutya , wazisebenzela eyedwa, kodwa oko kwaqala ukutshintsha xa u-Augustine (354-430), umbhishophu waseHippo eNyakatho Afrika, wabhala umthetho, okanye isetyenzisiweyo seendwendwe kunye neentonga lwakhe lawulo. Kuyo, wagxininisa intlupheko kunye nomthandazo njengokuba isiseko sobomi bendalo. UAgasine waquka ukuzila nokusebenza njengeziqhamo zobuKristu. Ukulawula kwakhe kwakungekho nkcazo engaphantsi kweminye eya kulandela, kodwa uBenedict waseNorsia (480-547), obhala kwakhona umgaqo wabamonisi kunye namadoda, wayexhomekeke kakhulu kwiingcamango zikaAugustine.
I-Monasticism yasasazeka kwiMeditera naseYurophu, ngokuyininzi ngenxa yomsebenzi wama-monks ase-Ireland. Ngama-Middle Ages, uMthetho weBenedictine, ngokusekelwe kwimiqondo kunye nokusebenza kakuhle, wawusasazeke kwiYurophu.
Iimonki zoLuntu zazisebenza kanzima ukuxhasa iindwendwe zabo. Ngokuqhelekileyo umhlaba wanikwa iindwendwe ngenxa yokuba yayikude okanye icinga ukuba ihlwempuzekileyo yokulima. Ngetyala kunye nephutha, iidonki zafezekisa izinto ezintsha zokulima. Baye babandakanyeka kwimisebenzi enjengokukopisha imibhalo yesibini yeBhayibhile kunye neencwadi zakudala , ukubonelela ngemfundo, nokufezekisa umsebenzi wokwakha kunye nesinyithi.
Banyamekela abagulayo kunye namahlwempu, kwaye ngexesha leNkcazo Yomnyama , balondoloza iincwadi ezininzi eziye zalahleka. Ubuhlobo obunokuthula, ubambiswano ngaphakathi kwindlu yeendwendwe kaninzi babe ngumzekelo kummandla ongaphandle kwayo.
Ngekhulu le-12 neleshumi le-13, ukusetyenziswa kakubi kwaqala ukufakwa. Njengoko ezopolitiko zalawula iSonto LamaRoma Katolika , ookumkani kunye nabalawuli basekhaya basebenzisa iitrari njengeehotele ngelixa behamba, kwaye balindelwe ukuba badliwe kwaye bahlala kwindawo yokumkani. Ukufunwa kwemithetho kwabekwa amonki abancinci kunye namadonsa; iziphene zazivame ukuhlwaywa ngeentambo.
Ezinye iidolophu zaba zizityebi ngelixa abanye bengenakukwazi ukuzixhasa. Njengoko iimeko zezopolitiko nezomnotho zatshintshana ngeenkulungwane, iinqununu zathi ziba nefuthe elincinci. Ukuguqulwa kwecawa ekugqibeleni kwashukumisela iinqonta kwiinjongo zabo zokuqala njengezindlu zokuthandaza nokucamngca.
IMonasticism yosuku lwangoku
Namhlanje, amaninzi amakhulu aseRoma kunye namaOrthodox ahlala kwihlabathi lonke, ehluke kwiindawo ezihlala kwindawo apho iidonks okanye izindwendwe zithatha isifungo sokuthula, ukufundisa nemibutho yokunceda abakhonzayo nabahluphekileyo. Ubomi bemihla ngemihla buqulethwe ngamaxesha amaninzi okuthandaza, ukucamngca, kunye nemisebenzi yokuhlawula iindleko zommandla.
I-Monasticism idla ngokugxekwa ngokungabonakaliyo. Abachasayo bathi I- Great Commission iyala amaKristu ukuba aye ezweni kwaye ashumayele. Nangona kunjalo, u-Augustine, uBenedict, uBasil nabanye bafuna ukuba ukuhlukana emphakathini, ukuzila ukudla, abasebenzi kunye nokuzikhanyela kwakuphela ukuthetha ukuphela, kwaye ekupheleni kukukuthanda uThixo. Iphuzu lokuthobela umgaqo-mandla wawungekho ukwenza imisebenzi ukuze uzuze kuThixo, bathi, kodwa kunokwenzeka ukuba kususwe izithintelo zehlabathi phakathi kwe-monk okanye i-nun noThixo.
Abaxhasayo bamaKristu bodwa baxininisa iimfundiso zikaYesu Kristu ngokuphathelele ubutyebi zikhubekiso kubantu. Bathi uYohane umBhaptizi wayephila ngokuqinileyo njengomzekelo wokuzilahla nokukhankanya ukuzila kukaYesu entlango ukukhusela ukutya kunye nokutya okulula, okukhawulezileyo. Ekugqibeleni, bacaphuna uMateyu 16:24 njengesizathu sokuthobeka nokuthobela . Emva koko uYesu wathi kubafundi bakhe, "Lowo ofuna ukuba ngumfundi wam kufuneka azikhanyele aze athathe isiphambano sakhe aze andilandele." (NIV)
MN NAS tuh siz um
I-Monasticism yanceda ukusasaza ubuKrestu kwihlabathi lobuhedeni.
(Imithombo: gotquestions.org, metmuseum.org, newadvent.org, kunye neA History of Christianity , uPaul Johnson, iincwadi zeMida yeeNgqungquthela, 1976.)
Yintoni i-Illuminati iqhinga?
Ngaba Iincwadi kunye neFiction efanayo?
Ngaba 'Kuyabonakala' Ngaba ufuna i-Subjunctive?
I-Mount Saint Vincent Admissions
Ukufumana okufanelekileyo kwiMbhoxo: Imivuzo kunye namaGawulayo
I-Index yeInsect - Ihlelwe ngamagama eSayensi